musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Etiopiya Airlines uye Liege Airport Yakawedzera Kubatana Chibvumirano
Airlines • nhandare yendege • Belgium Kupwanya Nhau • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Ethiopia Kupwanya Nhau • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Liege Airport, nhandare yendege huru kwazvo yeBelgium uye nhanhatu nhandare yendege yekutakura zvinhu muEurope, icharamba ichive nzvimbo yekutakura zvinhu yeEthiopia inoshanda senzira yekufambisa pakati pe Africa neEurope kwemakore mashanu anotevera.
Etiopiya Airlines Cargo uye Logistics Services yanga ichishanda pamwe neLiege airport kune yayo yekufambisa zvinhu pakati pe Africa neEurope.
Mukubatana neLiege Airport, Ethiopian Cargo uye Logistics Services yanga ichipa nekukurumidza uye kwakachengeteka basa rekufambisa zvinhu kuEurope nekupfuura kwemakore gumi nemashanu.
Mune ramangwana nzvimbo yakatsaurirwa nhumbi inogona kuvhurwa muLiege North, kune iyo Ethiopia yaive mutengi wekutanga kutanga nayo.
Etiopiya Airlines Cargo uye Logistics Services uye Liege Airport vazivisa kuti vavandudza chibvumirano chavo chenguva refu chekudyidzana kusvika muna 2026. Liege Airport, nhandare yendege huru kwazvo muBelgium uye nhandare nhanhatu dzekutakura nhumbi muEurope, icharamba ichiva nzvimbo yekutakura zvinhu yeEthiopia inoshanda senzira yekutakura pakati pe Africa neEurope kune inotevera makore mashanu. Etiopiya Airlines Cargo uye Logistics Services, Africa inonyanya kutakura nhumbi network, yanga ichishanda pamwe neLiege airport kune yayo yekufambisa zvinhu pakati pe Africa neEurope.
Etiopiya Airlines Cargo uye Logistics Services Kubatira Managing Director, VaEnquanhone Minyashal vakati “Tinofara kuvandudza chibvumirano chedu chekudyidzana nevekare vatinoshanda navo panhandare yendege panguva yatiri kunyoresa kukura kukuru munzvimbo dzatinotakura zvinhu nekugona. Mukubatana neLiege Airport, Ethiopian Cargo uye Logistics Services yanga ichipa nekukurumidza uye kwakachengeteka basa rekufambisa zvinhu muEurope nekupfuura kwemakore gumi nemashanu ekushandira pamwe kwakabudirira. Mumakore mashanu anotevera, isu tichashanda kushandura yedu yekutakura zvinhu kuti ishumire Europe zvirinani nekuzvipira kwedu kutsva neLiege Airport. "Sechinonyanya kutakura pan Africa, Ethiopian Airlines icharamba ichisimbisa kubatana kwayo neLiege Airport kusimudzira mashandiro ayo pakati pe Africa neEurope."
Steven Verhasselt, VP Commerce yeLiege Airport yakati "Chekutanga, Liege Airport inoda kukorokotedza maEthiopian Airlines nevashandi vayo pamwe nevadikani zuva rakanaka rekuzvarwa makumi manomwe nemashanu. Zviri nekudada kukuru kuti isu tiri chikamu cheiyo nyaya yeEthiopia yekubudirira kweanoda kusvika makore gumi nemashanu uye LGG icharamba ichiita nzvimbo yekutakura zvinhu muEthiopia muEurope. Tichitarisa kumashure kubva pakutanga kusvika patiri nhasi, muEthiopia akatoita 75 nendege dzendege ku LGG, achisvika anoshamisa mamirioni 15 matani enhumbi akatakurwa. Zvakadaro, Steven Verhasselt anosimbisa, izvi zvakapfuura uye zvinogona kutariswa seyakanyanya kunakidza kutanga. Nhasi, tinopemberera ramangwana.
Ethiopia uye LGG yakavandudza chibvumirano chavo chekudyidzana icho chisingangosimbise nzvimbo yeEuropean Cargo muLGG kwemakore mashanu anotevera asi zvakare inoti muEthiopia ichave yakanyanya kudarika ndege yendege ichienda kuLGG. Mune ramangwana nzvimbo yakatsaurirwa nhumbi inogona kuvhurwa muLiege North, kune iyo Ethiopia yaive mutengi wekutanga kutanga nayo. Isu tiri kutarisira zvikuru kunhanho inotevera iyo ichabatsira Ethiopia kuti ishumire vatengi vayo kunyange zvirinani. Kupfuura nakare kose, LGG ndiyo ichava muzinda weEthiopia uye musuwo mukuru wendege pakati pe Africa neEurope. ”
Sekureva kwemushumo weAfrican Airlines Association's (AFRAA), Ethiopia yakapihwa chinzvimbo chekutanga nevatakuri nemotokari dzinotakura zvinhu muna 2020. Itiopiya yakatakura mazana mashanu ematani ezvekutakura uye 500 mamirioni evatakuri kuburikidza nemuzinda wayo mukuru, Addis Ababa Bole International Airport.